မိုးသည်းထန်စွာ Duty တိုက်ရိုက်စင်တာ, ဗိုင်းလိပ်တံ-အမျိုးအစားတိုက်ရိုက်စင်တာများ, Precision တိုက်ရိုက်စင်တာ, CNC ဒေါင်လိုက်တရုတ်နိုင်ငံတွင် Center ကထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းဖွင့်
Home > ထုတ်ကုန်များ > တိုက်ရိုက်စင်တာများတိုက်ရိုက်စင်တာများ
တိုက်ရိုက်စင်တာများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မိုးသည်းထန်စွာ Duty တိုက်ရိုက်ရေးစင်တာ, ဗိုင်းလိပ်တံ-အမျိုးအစားတိုက်ရိုက်စင်တာများ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Precision တိုက်ရိုက်ရေးစင်တာ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် & တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက် mt2 စင်တာများအစုံ
မြင့်မားသောတိကျ Multi ရည်ရွယ်ချက် MT တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက် 4pcs စင်တာများအစုံ
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Wood ကအလုပ်လုပ်စက်မြစင်တာစင်တာများနထေိုငျ
Center ကိုလျင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်စင်တာတွင်ဖွင့်အမြင့် Precision CNC
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Bull နှာခေါင်းတိုက်ရိုက် Center က MT5-80
မြင့်မားသောတိကျ DM314 အလင်းတာဝန်တိုက်ရိုက်အလယ်ဗဟို
တွင်ခုံစင်တာ Rotary အစွန်အဖျားအကြီးစား Duty တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ
မြန်နှုန်းမြင့် MT2 Bull နှာခေါင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ
high-quality MT ထိပ်တန်းအစွန်အဖျားခေါင်းကိုသေစင်တာများ
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက် Rotary အစွန်အဖျားတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ
high-quality MT2 သေစင်တာများ
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက် 4pcs စင်တာများအစုံ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
မြန်နှုန်းမြင့် & တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ CNC တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ 1. နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်: OLIMA အမှတ်တံဆိပ် 2004 ကတည်းကဒီလယ်ပြင်၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း: ကျနော်တို့စက်ရုံ, PRICE မှာသငျသညျမွငျ့မားတိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ 3. အရည်အသွေးအာမခံချက်:...
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက်ပေါင်းစုံရည်ရွယ်ချက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool...
CNC အဘို့အမြင့်မြန်နှုန်းတိုက်ရိုက်စင်တာများ CNC အဘို့အမြင့်မြန်နှုန်းတိုက်ရိုက်စင်တာများ, စက်များတွင်စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အလုပ်အပိုင်းအစကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ်အမြီးစတော့ရှယ်ယာဝင်ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper Shanks နှင့်အတူအမြီး, ။...
အိတ်စတန်းရှင်းသိကောင်းစရာနှင့်အတူမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတိုက်ရိုက်စင်တာများ တိုက်ရိုက်စင်တာများ MT1 / 2For Wood က-အလုပ်လုပ်စက်များ, စက်ကိရိယာတခုအစိတ်အပိုင်းများစက်၌တည်၏။ အလုပ်အပိုင်းအစကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ်အမြီးစတော့ရှယ်ယာဝင်ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper...
သစ်သားအလုပ်လုပ်စက်များအတွက်စင်တာများအစုံအပ်ချုပ်လက်စွပ် Live တိကျမှန်ကန်မှု: 0.01 ပစ္စည်း: 40Cr MT2 အလေးချိန်: 0.855KG သစ်သားသေတ္တာများပါဝင်သည်) အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Wood ကအလုပ်လုပ်စက်မြစင်တာစင်တာများနထေိုငျ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool...
မြင့်မားသောတိကျ DM314 Precision အလင်းတာဝန်တိုက်ရိုက်အလယ်ဗဟို 1. နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်: OLIMA အမှတ်တံဆိပ် 2004 ကတည်းကဒီလယ်ပြင်၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ 2. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း: ကျနော်တို့စက်ရုံ, PRICE မှာသငျသညျမွငျ့မားတိလေ့ကျင့်ခန်း Chuck ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ 3. အရည်အသွေးအာမခံချက်:...
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Bull နှာခေါင်းတိုက်ရိုက် Center က MT5-80 မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Bull နှာခေါင်းတိုက်ရိုက် Center က MT5-80, စက်များတွင်စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အလုပ်အပိုင်းအစကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ် tailstock ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper Shanks...
high-quality အကြီးစား Duty တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool...
high-quality Bull နှာခေါင်းတိုက်ရိုက်စင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
high-အရည်အသွေးကိုထိပ်တန်းအစွန်အဖျားခေါင်းကိုသေစင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
Wood ကအလုပ်လုပ်စက်များများအတွက်တိုက်ရိုက်စင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, NT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ,...
high-quality MT2 သေစင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool...
Wood ကအလုပ်လုပ်စက်များများအတွက်တိုက်ရိုက်စင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool...
Wood က-အလုပ်လုပ်စက်များများအတွက်ပေါင်းစုံရည်ရွယ်ချက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ အဓိကအားဒါ collets, tool ကိုကိုင်ဆောင်သူမျိုး, ဦးခေါင်းစီးရီး boring BT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, CAT tool ကိုကိုင်ဆောင်သူ, DAT tool...
တရုတ်နိုင်ငံ တိုက်ရိုက်စင်တာများ ပေးသွင်း
မိုးသည်းထန်စွာ Duty တိုက်ရိုက်စင်တာများ
1.material: stell GCr15 ဆောင်သော mandrel အသုံးပြုမှု
2. ခိုင်မာသော: HRC58-60 မြင့်မားကျောမှုနှင့်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု
3. precision≤5μ, မြန်နှုန်းမြင့် 12000rpm
4. တိုက်ရိုက်အလယ်ဗဟိုအဆင့်မြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိကျသေချာ, တိကျ roller ဖြစ်စေသောစပါးနှင့်အတူ angular အဆက်အသွယ်ဖြစ်စေသောစပါးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုလိုက်ဖက်ချမှတ်။
5. fron အဆုံးမှာလက်စွပ်ပိတျထားသောမြေမှုန့်အထောက်အထားများနှင့်ရေအထောက်အထားဖြစ်ပါသည်, အသက်ရှင်စင်တာ၏ဘဝအသက်တာရှည်, ဝံ influene အအေးကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
စက်များတွင်မိုးသည်းထန်စွာ Duty တိုက်ရိုက်စင်တာများ, စက် tool ကိုစိတျအပိုငျး။ အဆိုပါ workpiece ကန်တော့ချွန်ဆန့်ကျင်က၎င်း၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူစက် tool ကိုဗိုင်းလိပ်တံ taper သို့မဟုတ် tailstock ရိုးတွင်း၌ installed တစ် taper Shanks နှင့်အတူအမြီး, ။ ရှုပ်ထွေးအစိတ်အပိုင်းများကိုရင်ဆိုင်ရဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နှင့်ထောက်ပံ့အစိတ်အပိုင်းများ၏ဗဟိုအပေါက်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ထိပ်အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးအပ်ချုပ်လက်စွပ်တစ် Clamp device ကိုတစ် shell ကိုတစ်ဦးပုံသေ pin ကိုတစ်ဦးဖြစ်စေသောစပါးနှင့်အဓိကဝင်ရိုးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အပ်ချုပ်လက်စွပ်ထိပ်တန်းအဆုံးနိုင်ပါတယ်အခြားအဆုံးတွင်, ဗဟိုအပေါက်သို့မဟုတ်ပိုက်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းစိတ်အပေါက်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်ချိန်း Clamp device ကိုအားဖြင့်အပ်ချုပ်လက်စွပ်တစ်လုံးသို့မဟုတ် conical အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ စိတျအပိုငျးခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဗဟိုအပေါက်ထိလို့မရဘူးသောအခါ, Clamp ကိရိယာ၏အသုံးပြုမှုကိုကွေ့ညှပ်ရန်။ ထိပ်နှစ်ခုအောင်မြင်ရန် shell ကိုနှင့်အဓိကဝင်ရိုးလေ့ကျင့်ခန်း pin ကိုအပေါက်နှင့်တကွ, ပုံသေ pin ကို pin ကို၏ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်။ ထိပ်တန်းကိုလည်းတူးဖော်, ထည်၏လုပျငနျးအတှကျအသုံးပွုနှင့်အပေါက်အပေါ်တွင်မူတည်နိုင်ပါသည်။
မိုးသည်းထန်စွာ Duty တိုက်ရိုက်ရေးစင်တာ